China GE 1000NG & NGS-G9620-D-EN-6.3KV ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | Hongfu dị ọhụrụ
Gas gas jikọtara ọnụ
Nhazi na atụmatụ:
• injin dị elu. & AC synchronous onye ọzọ.
• safetygbọ okporo ígwè nchekwa gas na ngwaọrụ nchedo gas na ịpụpụ.
• sistemu na-eme ka ahụ dị mma maka ọnọdụ okpomọkụ ruo 50 ℃.
• Nnwale ụlọ ahịa siri ike maka gens niile.
• Industrial silencer na silencing ikike nke 12-20dB (A).
• sistemụ nchịkwa dị elu: Sistemu njikwa ECI gụnyere: sistemụ mgbanye, sistemụ njigide, usoro njikwa ọsọ, sistemụ nchebe protection ikuku / njikwa akara ikuku na ikuku cylinder.
• Site na sistemụ igwe na-ekpo ọkụ na Ọdịdị Ọkụ ahụ iji jide n'aka na ngalaba ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na-arụkarị ọrụ na gburugburu 50 temperature gburugburu ebe obibi.
• Independent eletriki akara kabinet maka ime akara.
• Multi-ọtọ njikwa usoro na mfe ọrụ.
• Mkparịta ụka nkwukọrịta data jikọtara n'ime usoro nchịkwa.
• Nyochaa batrị batrị na chaja na akpaaka.
Unit ụdị data
+ Sistem Ikwuputa Okpomoku
Genset nnabata na ọkọlọtọ
Mmepụta na-aga n'ihu
mgbanwe olu ike
Mmepụta eletriki kW
Iji mmanụ kW
Ikike na mains yiri mode
Ugbu a （A） / 6300V / F = 0.8
1000NG / 1000NGSGas gas jikọtara ọnụNhazi na atụmatụ: • injin dị elu. • AC synchronous alternator.• safetygbọ okporo ígwè nchekwa gas na ngwaọrụ nchedo gas na ịpụpụ.
1 、 data sitere na gas sitere na gas eke nwere onu ego nke kk 10 nke kWh / Nm³ na methane no. > 90%
2 data data nke egosiputara dabere na udiri onodu dika ISO8528 / 1, ISO3046 / 1 na BS5514 / 1
3, A na-atụle data ọrụ ọkọlọtọ n'ọnọdụ ọkọlọtọ: ikuku ikuku zuru oke ： 100kPa Ọnọdụ okpomọkụ ： 25 Celsius C ikuku iru mmiri ： 30%
4, Rating mmegharị na ihere ọnọdụ dị ka DIN ISO 3046 / 1.The ndidi maka kpọmkwem mmanụ ụgbọala oriri bụ + 5% na gosiri mmepụta.
5, Dimension na ibu n'elu bụ nanị maka ọkọlọtọ ngwaahịa na pụrụ ịbụ isiokwu ịgbanwe. Dika ejiri ihe akwukwo a mee ihe maka ichoro echedo, were nkọwa nke Smart Action nyere tupu ikwenye dika nke ikpeazu.
6 temperature Ọnọdụ ihu igwe dị ọcha bụ -30 Celsius ~ 50 ° C; mgbe ọnọdụ okpomọkụ karịa ogo 40 Celsius, a na-ebelata ikike 3% maka nke ọ bụla 5 Celsius C na-abawanye na ọnọdụ okpomọkụ. Eluigwe dị elu erughị mita 3000; mgbe elu karịrị mita 500, ike e mere ka ọ belata site na 5% maka mita 500 ọ bụla dị elu.
Prime ike Operating Data insolated Mode
Rating (F) KVA ike ike KVA
Generator ọkụ Ise
Ugbu a A
Teknụzụ arụmọrụ Genset na teknụzụ nrụpụta
Bufee oge ọsọ ọsọ na 1.1xSe (awa)
Ihe nnochi ekwentị (TIF)
Ntọala ntọala volta
Ekwentị kwekọrọ na isi ihe (THF)
≤2% ， dị ka kwaBS4999
Mgbaghari ọsọ steeti
≤≤ 2 ％
Ntọala ntọala welded pụrụ iche, ndị na-ahụ anya na-ama jijiji na imewe maka iweli elu
Na eserese klas dị elu, ihie na-adịgide adịgide yana nguzogide megide abrasion na defacing
Akwụkwọ ntuziaka nwụnye, arụmọrụ na usoro mmezi ikuku
Kpụrụ na asambodo
IEC34ISO9001: asambodo usoro ihe nlere nke 2008
Ighafe onodu elektrik diri nwa oge
Oge mgbapụta voltaji
Nhazi oge nchịkwa
Oge dị mkpụmkpụ - ga - emegharị iwu oge
Oge nkwụghachi azụ (s)
Ugboro ugboro-ala ugboro
Nzaghachi oge mgbake (s)
Line Volta Waveform Sine Distortion Ratio
Iyuzucha oke oruru 4544 n'arọ / h
Iyuzucha okpomọkụ 480 ℃
Oke allowable iyuzucha azụ mgbali 4 Kpa
Empt: （Nhọrọ） NOx: ≤500 mg / Nm³ na 5% ikuku oxygen
CO ≤600 mg / Nm³ na 5% ikuku oxygen
NMHC ≤125 mg / Nm³ na oxygen oxygen 5%
Noisegba gburugburu ebe obibi
Pressureda ụda olu dị anya na ogologo ihe ruru 7 m(dabere na gburugburu)
98dB (A) / Mepee 83dị 83dB (A) / Silent Type
 Mkpokọta ala gbadoro agbada nke ihe ntụgharị egwu na-adabere na oke nkụ.
Gas oriri mgbali
Methane olu ọdịnaya
Obere okpomọkụ uru （LHV）
Gas Oriri kwa elekere na 50% ibu na 75% ibu na 100% ibu
 Mgbe ndị ọrụ chọsiri ike inye gas gas, a ga-atụgharị data dị mkpa nke akwụkwọ ntuziaka.A na-akwado ikuku gas gas ECER110. Akụkụ nke ụgbọ oloko gas na-ezukọ Ntuziaka 90/356 / EWG.
Mmanụ ala (ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa mwepu 5 Celsius C / ihere okpomọkụ bụ dị obere ka mwepu 5 Celsius C) API 15W-40 CF4 / API 10W-30 CF4
Iho mmanụ ikike ikike min./max.
50% mmiri dị nro na 50% ihe mgbochi na-egbochi (ethylene glycol, na ntinye nke ihe na-egbochi ihe dị n'etiti 40% -68%)
ntinye ikuku ikuku
 Thekpụrụ mmanụ ahụ na-ezo aka n’ihe dịka ọnọdụ okpomọkụ na mpaghara ikuku.
Ọrụ data alternator AC Injin ruru eru
V-20 cylinders, turbocharger na intercooler
Rating (H) KW ike ike
Bore x ọrịa strok
Rating (H) KVA ike ike 1250 Mwepụ （L）
Ọrụ ntụgharị ọzọ （%）
Egosiputa ikike ikike
Mmanụ oriri max.
Klaasị mkpuchi igwe
H na klaasị
Min oriri eruba, （kg / h）
Ejiri otu ike na-achịkwa eletriki na-achịkwa ọkụ
Usoro mkpachapụ anya
Mmanụ akara mode
Ẹkot combustion, mechiri emechi akaghị njikwa
Gosiri ọsọ （min-1)
Ọnọdụ iwu ọsọ
Ntinye aka ozo nke GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 na AS1359.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ abụọ enwere mgbanwe ọdịiche site na% 2%, a ga-eji kọmpụta voltaji akpaka (AVR).
Injin Onye ozo Canopy na isi Oko elektrik
Gas Sistemụ / Igodo nke Igwe Ihe njikwa LambdaKọmputa gọvanọ actuatorEletriki mmalite motoUsoro batrị AC alternatorIhe mgbochi klaasị klasNchedo IP55AVR voltage njikwaNjikwa PF Steel sheel isi etitiMgbaaka engine Ndị na-ekewapụ ịma jijiji Pgba ụda na-egbochi ụda (nhọrọ)Dust filtration (nhọrọ) Ihe mgbawa ikuku7-anụ ọhịa ihuenyo mmetụMmekọrịta nkwukọrịta Ochichi ọkụ ọkụ kabinetAuto Nchaji usoro
Usoro ntinye gas Lubrication usoro Voltagekpụrụ elele Sistemụ nsị / okpomoku
Safetygbọ okporo ígwè gasNchedo mmiri na-enyocha gasIhe igwekota ikuku / igwe Mmanụ nzachaMịnịsta inyeaka kwa ụbọchị (nhọrọ)Auto refilling mmanụ usoro 380 / 220V400 / 230V415 / 240V Nyocha ikukuIke silencerIyuzucha bellows
Traingbọ Gas Ọrụ na akwụkwọ
Akwụkwọ ntuziaka ebipụ2 ~ 7kPa nlele nleleGas iyoNchedo Solenoid nchekwa (ụdị ihe mgbawa bụ nhọrọ) njikwa nrụgideOnye na-ejide ọkụ dị ka nhọrọ Ngwaọrụ ngwugwu Injin arụ ọrụ Ntinye na oru ntuziaka Gas quality nkọwapụta Akwụkwọ ntuziaka njikwa ntuziaka Ntuziaka software Mgbe ọrụ ọrụ Akụkụ akwụkwọ ntuziaka Standard ngwugwu
Injin Onye ozo Lubrication usoro
Keadighi rarii ikuku nyoIhe nchekwa nchekwa nchekwa nchekwa ọkụIgwe mmiri Brand Genrand: Stamford, Leroy-Somer, MECCỌgwụgwọ megide iru mmiri na corrosion Mepụta mmanụ mmanụ ọhụrụ nwere ikike dị ukwuuMmanụ oriri na nlele nleleMmanụ mgbapụtaMmanụ ọkụ
Usoro eletriki Usoro ntinye gas Voltaji
Ime nlekota Grid-njikọ eriri akara ngosi Gas eru nleleNtachapụ gasNrụgide reducer gas pretreatment mkpu usoro 220V230V240V
Ọrụ na akwụkwọ Usoro ike Usoro mgbanwe igwe
Ngwá ọrụ ọrụMmezi na akụkụ ọrụ Erzọ ntụgharị atọChebe ọta site na akaSilencer biỌgwụ gas na-agwụ ike Igwe ọkụ ọkụ mberedeIgwe ọkụ eletrikOkpomọkụ mgbake usoroỌdụ nchekwa nchekwa ebe nchekwa
A na-anakwere usoro nchịkwa mmemme na ngosipụta ihuenyo mmetụ, na ọrụ dị iche iche, gụnyere: nchebe na njikwa engine, ihe dị n'etiti gensets ma ọ bụ gensets na grid, yana ọrụ nkwukọrịta. wdg
→ Igwe na-achịkwa ụdị ga-akwụ ụgwọ maka ma otu na ọtụtụ gensets na-arụ ọrụ na njikere ma ọ bụ ụdị ya.
Nkwado nke ngwa dị mgbagwoju anya maka imepụta ike na ebe data, ụlọ ọgwụ, ụlọ akụ yana ngwa CHP.
→ Nkwado nke engines abụọ na igwe elektrọnik - ECU na injin igwe.
Control Injin zuru ezu nke injin, ihe igwe ihe na teknụzụ na-achịkwa site na otu mpaghara na-enye nnweta data niile akọwapụtara n'ụzọ kwekọrọ na oge.
F Ebe nkwupute buru ibu na-ekwenye ekwenye n'ime usoro nlekota nke obodo (BMS, wdg)
PL Igwe ntụgharị PLC nke wuru n’ime na-enye gị ohere ịhazi arụmọrụ ahaziri iji zute ihe ndị ahịa chọrọ n’onwe gị n’amaghị usoro mmemme na ngwa ngwa.
Remote Nweta akara ntanetị na ọrụ dị mfe
Stability Nnukwu nkwụsi ike na nchekwa
Ini na-agba ọsọOru Mkpu Oti mkpu
obere mmanụ mgbali
elu coolant okpomọkụ
Pịa bọtịnụ nkwụsị mberede
mgbaàmà ọsọ ọsọ furu efu
Nyochaa injin injin ： na agba, ịubụ mmiri, Inye nri, ume
Voltaji na njikwa ike ihe
12V ma ọ bụ 24V DC NmaliteNweta Nweta Ohere Ime Nweta Dị Ka NhọrọNtinye mmalite / Kwụsị Njikwa akpaakaTọọ Ntinye, Mmepụta, Oti mkpu na OgeNtinye akara Nọmba, Nmepụta Njikwa NyochaAkpaghị aka ọdịda ala mberede nkwụsị na kpatara ngosi batrị voltaji genset ugboroNchedo na IP44Nnukwu nchọpụta gas
Njikwa injin: Lambda mechiri akara loopSistemụ / Igodo nke IgweKọmputa gọvanọ actuatorMalite njikwa njikwa njikwa njikwa njikwa njikwa njikwa Njikwa jenerato:Ike njikwa Njikwa RPM (synchronous) Ikesa ibu (ọnọdụ agwaetiti) Njikwa volta Volta na-esochi (synchronous) Njikwa volta (ọnọdụ agwaetiti)Ike nkesa(agwaetiti) Njikwa ndị ọzọ: Mmanụ na-ejuputa na akpaghị akaOriri Valve akaraNjikwa akara
Ntinye aka na nti nke uto
batrị voltajiỌzọ data ： U 、 I 、 Hz 、 kW 、 kVA 、 kVAr 、 PF 、 kWh 、 kVAhGenset ugboro Ọsọ InjinIni na-agba ọsọỌnọdụ nrụgide mmiriMmanụ mmanụ Coolant okpomọkụMmesho nke ihe oxygen na gasNnyocha ọkwa Coolant okpomọkụMmanụ ụgbọ mmiri na-agbanye mmanụ
Nchedo injin Nsogbu mmanụ dị alaNchedo ọsọOke ọsọ / ọsọ dị mkpụmkpụMalite ọdịdaỌsọ ọsọ efuola Nchedo ọzọ
Ijufebiga ihe ókè
N'ime / n'okpuru ugboro
Enweghi mgbanwe ugbu a
Nchedo busbar / mains
Nchedo sistemụ Oru Mkpu Oti mkpuAkwa coolant okpomọkụIbu ebuboNkwụsị Mberede
Ese, Akụkụ na nke Genset-1000NG
Genset size (ogologo * obosara * elu) mm 5500 × 2000 × 2400
Genset akọrọ arọ （Mepee） n'arọ 9000
Usoro ịgba Akwa mkpuchi ntụ ntụ AL RAL 9016 & RAL 5017 & RAL 9017）
Ese, Akụkụ na nke Genset-1000NGS
Genset size (ogologo * obosara * elu) mm 12192 × 2438 × 2896 （akpa）
Genset akọrọ ibu （Silent Type） kg 16500 （Akpa）
Akụkụ bụ maka naanị maka.
Nke gara aga: GE 520NG & NGS-E3262 LE202-M-EN-400V
Osote: GE 1000NG & NGS-G9620-M-EN-400V
Onye isi 400kw
Ihe njikwa 55kva
Ahịa Dizel Generator, Obere Generator, Ego njikwa, 240kw Generator, Ahịa Generator ji arụ ọrụ, Dizel Generator Na Kubota Injin,